कस्तो छ तपाईको बुधबारको राशिफल ? – Satyapati
कस्तो छ तपाईको बुधबारको राशिफल ?
२०७७ पुस २९ गते, बुधवार, १३ जनवरी २०२१ । पौष कृष्णपक्ष, औंसी तिथि (१०ः२७ बजेपछि पौष शुक्ल प्रतिपदा), उत्तराषाढा नक्षत्र, चन्द्रराशि– धनु १२ः३१ बजेपछि मकर ।
कमजोरीले चिन्ता बढाउनेछ भने परिस्थितिवश चिताएको काम रोकिन सक्छ । अरूका लागि बुद्धि खर्चनुपर्ला । अरूले आफ्ना कमजोरीको फाइदा उठाउन सक्छन् । रोकिएका काममा दोहोर्याएर प्रयत्न गर्नुपर्ला । मध्याह्नपछि व्यापारलगायत आर्थिक लाभ हुने काम प्रारम्भ हुनेछ । रोकिएका काम बन्नाले उत्साह जाग्नेछ । उपलब्धिको स्रोत पहिल्याउन सकिनेछ । आँटले काम पूरा हुनेछ ।
प्रतीक्षा गरिएको नतिजा अलि कमजोर आउन सक्छ । सहयोगीहरूले साथ दिनेछन् र व्यवसायमा सामान्य फाइदा पनि हुनेछ । सोचेको लाभ भने नहुन सक्छ । मध्याह्नपछि स्थितिमा सुधार आउनेछ । प्रातिस्पर्धीलाई उछिन्दै आयस्रोत बढाउन सकिनेछ । आफ्नो क्षेत्रमा अधिकार जमाउन सफल भइनेछ । दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ हुन सक्छ । विभिन्न अवसर पनि प्राप्त भइरहनेछन् ।
स्रोत(साधन जुट्नाले गरिएका कर्मको उचित प्रतिफल प्राप्त हुनेछ । मिहिनेतले दैनिकीमा परिवर्तन ल्याउन सकिनेछ । रोकिएका काम बन्ने र नयाँ काम सुरु गर्ने समय छ । मध्याह्नदेखि भने आफन्तहरू टाढिन सक्छन् । पहिले दिएको वचनले अप्ठ्यारो पार्न सक्छ । साथीभाइसँग सन्तुलित व्यवहार गर्नुहोला । अरूका लागि बुद्धि खर्चनुपर्ला । भूमि तथा पशुधनबाट लाभ उठाउन सकिनेछ ।
आगन्तुकहरूले अलमल्याउने हुँदा सोचेको काममा बाधा पुग्न सक्छ । स्वास्थ्यका लागि खानपानमा सजग रहनुहोला । सानो कमजोरीले महत्वाकांक्षी योजना रोकिन सक्छ । मध्याह्नपछि विवादास्पद जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अनावश्यक प्रलोभन देखाउनेहरूले फसाउन सक्छन् । बेसुरमा दिइएको वचनले पनि अप्ठ्यारो पार्न सक्छ । अध्ययनमा त्यति समय दिन नसकिएला ।
मिहिनेत गर्दा आयस्रोत फेला पर्नेछन् । नयाँ तथा नियमित काम सम्पादन गर्न सकिनेछ । व्यापार बढ्नेछ भने आम्दानी पनि मनग्ये हुनेछ । तर मध्याह्नपछि खर्च बढ्नाले अर्थ अभाव देखा पर्न सक्छ । ईर्ष्या गर्नेहरूले फसाउन सक्छन् । सोखले फजुल खर्च पनि बढाउनेछ । आलस्य गर्दा आँटेको काम बीचैमा रोकिन सक्छ । आवश्यकता पूरा गर्न सरसापट वा ऋण लिनुपर्ने हुन सक्छ ।